10 Oracle Training Courses & Certification for your career growth | ITS
10 Oracle Based Training Courses & Certification inogona kukupa Kukura Mubasa Rako
4. Oracle Database 11g: Data Guard Administration Kutora 2
5. Oracle Database 11g: Basa Rokugadzirisa Ndakabudisa 2
7. Tsanangudzo 11g R2 Zvitsva Zvitsva
8. Oracle Database 11g: Yakadzama PL / SQL
Dhiabhorosi yeOracle ndeyekuunganidza kwemashoko anoonekwa semubatanidzwa. Chikonzero chebhuku rekuchengetedza mabhuku ndechekuchengetedza uye kugadzirisa dambudziko rakabatana. A server database ndiyo nzira yekuchengetedza nyaya dze data management. Zvose mune zvose, sevhisi inoshanda zvine ruzivo rwakanyanya mune imwe nzvimbo yekuchengetedza kuitira kuti vatengi vakawanda vanogona kuwana panguva imwe chete mashoko akafanana. Izvi zvinonyatsozivikanwa pavanenge vachiendesa mberi. Sesi yepa database inotarisirawo kusagamuchirwa kusvika kune uye inopa mhinduro dzinoshanda dzekuodzwazve kuora.
Oracle Database ndiyo iyo nheyo huru inotarisirwa kugadzirisa mabhizimusi makuru, kugadzirisa uye kugadzirisa mari yekutarisira dhesi uye kushandiswa. Kuita kushandiswa kwematrix kunogadzira mapurisa akawanda emabhizimisi-akaenzana, akadzivirirwa simba uye sevhavha. Neichiyanzvi, humwe humwe hutsva hunogona kukurumidza kugoverwa kubva mudziva rezvikamu. Izvo hazvisi izvo zvinodiwa kuti zvive zvakakosha zvemabasa, sezvo muganhu unogona kuve wakanyatsokwanisa kuiswa kana kutorwazve kubva kumadzimai emvura sezvaanoda.
Dhiyabhorosi ine zvivakwa zvakasimba uye zvivako zvemuviri. Sezvo chimiro chepanyama uye chengwaru chiri chekuzvimiririra, kunyatsogadziriswa kwemashoko kunogona kutarisirwa kunze kwekuita kuti pave nevanopinda maitiro akabatanidzwa. Zvimwe zveOracle Training Courses uye Zvitemiti zvinopiwa pasi apa:
Oracle Solaris 11 System Administration Training inobatanidza huwandu hwakawanda hwehutano hwakarongwa huripo pana Oracle Solaris 11.3 OS. Izvo zvikamu zvakachengetedzwa zvinobva pakutanga hurongwa hwekushanda pamusangano wega woga, kuongorora uye kuongorora kunokosha. IOracle Solaris 11 System Administration Course inotarisirwa kupa hurumende itsva vatungamiri, uye inoedzawo vatariri vemuitiro avo vatsva kuOracle Solaris 11 Operating System, neine maitiro avanofanira kutora maitiro avo emabasa nekubudirira.
Ita mapurogiramu ekugadzirisa uye programming bundle upgrades.
Kutarisa masimba, maitiro uye kusvika kukutonga.
Chengetedza mashoko ekuchengetedza, nzvimbo, system uye vatengi.
Dzidzo yacho inopa kuisa maoko-kuchinzwisisa kwemahofisi makuru ehurongwa sangano nechinangwa chekugadzirisa hurumende yepamabasa basa rakagadzirirwa.
Iyi Oracle Solaris 11 Security Administration yekurovedza inokubatsira kuti uvake kudzidza nekukwanisa kushandura kuchengeteka paOracle Solaris 11 sarudzo yekushanda. Vadzidzisi veYunivhesiti veMutungamiri Oracle vachakubatsira kuti uongorore zvinhu zvitsva zvinodzivirirwa zvinowanikwa muOracle Solaris 11.1 naOracle Solaris 11.2; tsanangura kuti ungashandisa sei zvinhu izvi kuderedza dambudziko rekukanganisa uye kuchengetedza zvose zvikumbiro uye ruzivo.
Kuratidzira hutano hwakanyanya hunochengetedza uye hufambira mberi.
Kodzero dzekambani dzakachengeteka, kubata kodzero, zvinyorwa uye zvinyorwa zvekurekora.
Kushandisa cryptographic administrations, kuronga kuchengeteka, nzvimbo dzakachengeteka uye zvakachengetedzwa kuchengeteka.
Chengetedza hurongwa hwekuchengetedza uye hutungamiri.
Kuchengeta zvinyorwa zvakakwana uye kuchengetedzwa kwakagadzikana musimboti nguva.
Paunenge uchisiya kosi iyi, iwe uchasiya nekunzwisisa kukuru kweOracle Solaris 11.2 sangano rekuchengetedza uye hutsva hunovandudzwa huchiitwa kuHS. Izvi zvinokubvumira kuti iwe ushande yako yekukumbira kushandiswa kwemabasa muchivande, hafu nehafu, kana mashura akazaruka. Iyi dzidzo ichakubatsirawo iwe kubudirira kuita chigadziro chekugadzirisa, nekugadzirisa nekuongorora kuchengeteka pane hurongwa hweSolaris 11.
Shandisa Oracle Solaris 11.2 OS Expertise
Dzidzo iyi inowedzera pamusoro pehutano hwehutano hunyanzvi hwakadzidziswa muOracle Solaris 11.2 System Administration courses. Iwe uchashanda nevadzidzisi veOracle University vadzidzisi kuvaka nzwisiso yakajeka yeOracle Solaris 11.2 kuchengetedza zvinhu zvaunogona kuchinja mumabasa ako ezuva nezuva.
Muchiitiko chekuti iwe hauna Oracle Solaris 11 sangano rinosangana nehurongwa, iwe unofanira kutanga watora Oracle Solaris 11 System Administration uye Oracle Solaris 11 Advanced System Administration chekutanga kutanga kuvimbisa kudzidzira kunogadzirisa kweOracle Solaris 11 sangano rinotanga kushanda tora iyi forte course. Avo vane Oracle Solaris 10 ruzivo vanofanira kutora Transition kuOracle Solaris 11, sezvo inowedzera paOracle Solaris 10 yekudzidza uye inopa kurovedza mamwe maitiro akakodzera pane zvakaitika kwauri.
Izvi zvakafambisa Oracle Solaris 11 Advanced System Administration kudzidzisa inopa maoko akaoma-kubatanidzwa neOracle Solaris 11.3 hurongwa hwekushanda. Iwe uchanzwisisa pfungwa dzakagadziriswa uye dzakarongeka sangano mazano kuburikidza nekukanganiswa kwezvidzidzo uye maoko-pane mabasa achasimbisa kudzidza kwako.
Kutarisa mahofisi uye mahofisi emashandisi anoshandisa SMF.
Kutarisa mapurogiramu epurogiramu nekushandisa IPS.
Enda pasi uye udzokezve zvakare ruzivo rwekushandisa ZFS.
Saronga hurongwa uye hurongwa hwekukwanisa kuwanikwa.
Kutarisa sangano rehurumende.
Kuchengetedza Oracle Solaris 11 OS.
Shandisai Oracle Solaris 11 OS pamasangano akasiyana-siyana.
Kutevedzera hurongwa hwekuzivisa nekunyora mahofisi.
Ita basa rinokosha, rinofanira kukurumidza uye unzwisisiro wepamusoro we sangano reOracle Solaris 11.3 sangano nekuvandudzwa patsva kunoitirwa OS, iyo inokubvumira kuti uite zvinoshandiswa zvikumbiro zvako zvekushanda muchivande, hafu nehafu, kana mashoma akazaruka.
Shandisa Oracle Solaris 11.3 OS Expertise
Dzidzo iyi inowedzera pamusoro pekugadzirisa sangano rehutano hwakadzidziswa muOracle Solaris 11.3 System Administration Course. Iwe uchashanda nevadzidzisi veOracle University vadzidzisi kuvaka nzwisiso yakajeka yeOracle Solaris 11.3 OS iwe unogona kuchinja mune basa rako rezuva nezuva.
Ndapota Cherechedzai: Ichi ndicho Chikwata Chekudzidza
Iyi ndiyo nzira yakakwirira iyo inopinda mukati memashoko ekufarira kuronga nekugadzirisa hurongwa hweOracle Solaris 11. Muchiitiko chekuti iwe hauna Oracle Solaris 11 sangano rinosangana musangano, iwe unofanira kutora Oracle Solaris 11 System Administration yekutanga kuti uwane ruzivo rwakabudirira rweOracle Solaris 11 sangano rinotarirwa kare. Avo vane Oracle Solaris 10 ruzivo vanofanira kutora Transition kune Oracle Solaris 11, sezvo inowedzera paOracle Solaris 10 ruzivo uye inopa kurovedza mamwe maitiro akabatanidzwa pane zvakaitika kwauri.
4. Oracle Database 11g: Data Guard Guard Release 2
Iyi Oracle Database 11g: Data Guard Administration Kushandisa 2 kudzidzisa kunokubatsira kuti uwedzere mikana yekushandisa Oracle Data Guard kuti uone dare rako re Oracle rakarongwa uye risingaiti nguva. Tsvaga kuti Data Guard yakamira sei zvinyorwa zvinogona kushandiswa pakusimbisa zvisikwa zvekusika, somuenzaniso, kuzivisa, kubvunzurudza uye kuongororwa, nepo muchigarire.
Offload bhizimusi kutarisa kune imwe sarudzo
Offload reinforcement inoda kune imwe sarudzo
Ita zvakanyanya kufambidzana zvirongwa
Vimbiso yakakurumidza, yakasimba, yakachengeteka uye yakajeka kutarisira kuurawa. Kuvandudza mitoro yebasa rekodhidhi, kuburitsa IT cost uye kuratidza hukuru hwehutungamiri kuburikidza nekupa hukama hwakanaka uye hurumende mukati meDatacenter yako.
Iyi kiravha inotsvaga Data Guard engineering, kugadziriswa kwepanyama uye kuchenjera kwakamira zvidzidzo uye chikamu chinofamba. Mudzidzisi vadzidzisi vachakubatsirawo kuti uongorore Oracle Data Guard 11g zvinhu, kusanganisira Oracle Active Data Guard uye kuratidza zvinyorwa zvakamira.
5. Oracle Database 11g: Kutungamirira Basa I Release 2
Iyi Oracle Database 11g: Mazano Okugadzirisa Ndinosunungura 2 course inoongorora zvakakosha zvehurongwa hwemashoko ehurumende. Vadzidzisi veYunivhesiti veOracle vese vachasimbisa zvinyorwa nemaitiro-maitiro anozogadzirisa iwe kuti uenzanise kuenzanisa kuongorora kweOracle Certified Associate.
Shandisai Girazi Grid Infrastructure.
Ita uye utarisire vatengi.
Taura uye ugadzire Dhaigwaro yeOracle.
Ita uye utarisire zvivako zvekutengesa.
Kutarisa Oracle Database.
Ngwarira Oracle database yekugadzira uye maitiro ayo maitiro anoshandisa uye kukurukurirana.
Ita kusimbisa nekudzokazve.
Vimbiso yakakurumidza, yakasimba, yakachengeteka uye yakajeka kutarisira kuurawa. Kuvandudza mitoro yebasa rekudhinda, kuunza pasi mari uye kubudisa hukuru hwehutungamiri kuburikidza nekupa simba rakanaka uye rinokurumidza kusangana mukati meDatacenter yako.
Ita An Operational Database
Iwewo uchanzwisisa nzira yekuita nheyo yekushandiswa kwemashoko uye zvakakodzera kugadzirisa matanho akasiyana nenzira yakakosha uye inyanzvi. Izvi zvinosanganisira kuongorora kuurayiwa, kuchengetedzwa kwemasvomhu, kukambirwa kwekambani nekugadzirisa / kugadzirisa zvirongwa.
Iyi Oracle Database 11g: Mazano Okugadzirisa Ndinosunungura 2 course inogutsa kudzidziswa kunofanira kuitirwa Oracle Certification Path. Mudzidzisi chete akaendesa mberi pawebhu (LVC, LWC), mu-kirasi (ILT) kana kuti Training Training Demand zvigutsa zvinodiwa. Kana iwe usingafungi kutora zvidzidzo zvekuti Self-Study Courses uye Knowledge Centre mafundo haagutsi kudzidzisa kunotarisirwa.
The Oracle Database 12c: Administration Workshop ichakuratidza pamusoro peOracle Database engineering. Iwe uchawana kuti unogona sei kubata zvakakwana neOracle Database muenzaniso, kugadzira Oracle Network Environment uye kuita rubatsiro rwemashoko. Muchikoro ichi, iwe uchazivana neOracle Database Cloud Service.
Ita uye ushande neOracle Database Instance.
Ita uye utarisire Zvigadzirwa Zvokugadzirisa.
Yakagadzira Oracle Network Environment.
Chengetedza dhesiyo uye utarisire kuitwa.
Dzidzai zvakakosha data pamusoro pekusimbisa nekudzorera zvirongwa.
Shandisa Oracle Support Workbench uye My Oracle Support kuti uvandudze Oracle Database programming.
Sarudza kunzwisisa kweOracle Database Cloud Service.
Vimbiso nokukurumidza, kuvimbwa, kuchengeteka uye nyore kutarisira kuitwa. Dhigirii rekuchengetedza mabhizimusi emabasa, kuburitsa IT cost uye kuratidza hukuru hwehutungamiri kuburikidza nekupa simba kubatanidzwa mune zvinyorwa zvese.
Shingairira muHands-On Practices uye Zviratidzo
Mudzidzisi mutungamiri uye maoko-pazviratidzo zvichakupai hupenyu hwechokwadi. Nokubatanidzwa mumaoko-pane mabasa ekusimbisa kudzidza kwako, iwe uchagadzira kutsvaga maitiro ekutarisana neAracle Database.
Iyi Oracle Database 11g: Ongororo Yokugadzira Release 2 inoongorora zvinyorwa zvemasangano makuru e database, kusanganisira nzira yekuisa nekuchengetedza dhiabhorosi yeOracle. Tsvaga nezveunyanzvi uye kuti nhengo dze database dzinoshanda sei uye dzinoshamwaridzana nadzo. Ita kusimbisa nekudzoka uye kuongorora nekugadzirisa ruzivo kuora mwoyo. Chengetedza zvinyorwa zvemashoko ezvinyorwa zvakadai seyekuyeuka, kuuraya uye zvinhu zvinoshandisa Oracle Database 11g.
Munharaunda iyi yeOracle Database 11G Advanced PL / SQL kudzidziswa, vadzidzisi veOracle University vadzidzisi vachakubatsira kuti uongorore zvinhu zvakadzama zve PL / SQL kuronga nekugadzira PL / SQL. Iwe uchanzwisisa kuti inopindirana sei ne database uye kushandiswa kwakasiyana-siyana nenzira yakanakisisa.
PL / SQL kugadzira kugamuchira nzira.
Ita PL / SQL zvishandiso izvo zvinoshandiswa ekuunganidza.
Itai kuti ruzivo rwebhuku rega rega rwuve nehuwandu hwakanaka hwekugadzirisa.
Nyora chidimbu kune zvinyorwa nekunze C uye Java applications.
Nyora chidimbu pane zvinyorwa zvinopesana nemitambo yakakura uye kushandisa SecureFile LOBs.
Nyora uye tune PL / SQL code kubudirira kubudirira kuita.
Ita kuti rubatsiro rweSQL rune ruzivo rwakapetwa ne PL / SQL mutauro wekunyora kodhi yekushandisa. Izvi zvinobatsira kushamwaridzana kwako kunzwisisa zvakakwana kushandiswa kwekushandisa Oracle zvakanaka maitiro.
Iwewo uchanzwisisa Virtual Private Database (VPD) kuti ushandise nzira dzekuchengetedza. Dzidza nzira nemaapurogiramu ekusimbisa zviyero zvinopesana neSQL kuregererwa kwehondo. Tsvaga kugadzirisa zvirongwa, kushandiswa kwekunze kweC neJava, mapeji eP PL / SQL uye yakanaka-grained kusvika.
Iyi Oracle Database 12c: Yakafambira PL / SQL kudzidzisa inokuratidza kuti ungashandisa sei zvakagadzirwa zveP PL / SQL pakuronga uye kutarisa PL / SQL kuti uone ne database uye kushandiswa kwakasiyana. Vadzidzisi veYunivhesiti veMutungamiri veYunivhesiti vachakubatsira kuti uongorore zvikamu zvepamusoro zvegadziriro yepurogiramu, zvisungo, zvinyorwa, zvinyorwa zvinyorwa zvekugadzira mazano uye accumulations
Nyora zvakanaka PL / SQL zvirongwa.
Tsvaga chirongwa chinobudirira.
Shandisa kunze kweC uye Java maitiro.
Shandisa PL / SQL kugadzira kugamuchirwa nzira.
Nyora chidimbu kuvhurairiri nekunze kweC C uye Java applications.
Nyora chidimbu kune zvinyorwa nemibvunzo mikuru uye shandisa SecureFile LOBs.
Nyora uye tune PL / SQL code inowedzera kuwedzera.
Tsvaga kuti unyore sei PL / SQL routines iyo inotsvaga PL / SQL yekushanda uye kuchengetedza nzira dzinogona kuwedzera kushandiswa. Nokuisa zvigadziro mumutambo uyu, iwe uchanzwisisa Virtual Private Database (VPD) kuti uite zvirongwa zvekuchengetedza uye uongorore maitiro nemaitiro ekusimbisa maitiro ako kurwisa SQL kukuvhiringidzwa kwekushungurudzwa. Kukura purogiramu yemari nekuita PL / SQL mapurogiramu anowirirana neC and Java code.
Zuva iri rimwe-Zviso reMySQL 5.6 ravhara zvinhu zvose zvitsva uye zvimwe zvigadziridzo zvinokosha kuMySQL 5.6 uye MySQL Enterprise Edition, kusanganisira kutonga, kuchinja, kugona uye kusimbiswa. Vadzidzisi veYunivhesiti yeVadzidzisi veYunivhesiti vachaitawo saizvozvo maitiro ekugara.
Vadzidzi Vanogona Kubatsirwa Nenzira Ino:
Vatsva vatsva veMySQL, avo vanenge vasati vambobatana nehutano hwehutano hwehupfumi.
Varipo MySQL vatengi vanoda kutsvaga nezvehusha hunobatsira hunofungidzirwa ne MySQL 5.5 Release
Saronga kushandiswa kwako kweyangu mySQL 5.6 kubuda kwezvinhu zvachose zvakakwana.
Database Training in Gurgaon | Database Certification muGurgaon
Vatangi Vatungamiri veOracle Database Certification
Ramangwana reOracle E-Business Suite uye Major Updates Mumakore Anotevera
Kutsanangura Oracle Dashboard